Kevin Rennie: Avy eo an-toerana mankany amin’izao tontolo izao · Global Voices teny Malagasy
Kevin Rennie: Avy eo an-toerana mankany amin'izao tontolo izao
Voadika ny 17 Jolay 2019 7:09 GMT
(Lahatsoratra teny Anglisy efa tamin'ny taona 2014 ity adika eto ity)
Tamin'ny volana Aprily 2008, gaga aho nahazo mailaka avy amin'ny olona tsy fantatra iray nangataka ahy handray anjara ao amin'ny Voices Without Votes, tetikasa Global Voices ho an'ny fifidianana filoham-pirenena Amerikana tamin'ity taona ity. Mbola tsy fantatro hoe ahoana no nahitan'i Amira Al Hussaini ahy, saingy enim-bolana taty aoriana, mbola nahagaga ahy foana ny fahavitrihany sy ny faharetany. Amira no tonian-dahatsoratry ny faritra ho an'ny Afovoany Atsinanana sy Afrika Avaratra (MENA).
‘Varavarankely mikasika izay lazain'ireo tsy Amerikana ao amin'ny bilaogy sy ny median'olo-tsotra momba ny politikam-bahiny Amerikana sy ny fifidianana filoham-pirenena 2008 ny VwV. Fiifangaroan'ny bilaogy sy rohy mankany amin'ireo lahatsoratra bilaogy Aostraliana ny lahatsoratro miisa 37. Mitondra ny lohateny hoe Aostralia: Fomba fijery Liam-pandrosoana avy ao Oz ny lahatsoratro voalohany. Tsara be izany talohan'ny nahazoan'i Obama ny fanendrena. Nofintinina hoe:
At this stage, Obama is the clearly favoured by progressive bloggers in Oz. It will be interesting to see how long the honeymoon lasts with the left if he wins the presidency. Or like Bush and most US leaders before him, will Barack quickly become the evil emperor rather than the hope for change?
Amin'ity dingana ity, Obama no hita fa tian'ireo bilaogera liam-pandrosoana ao Oz. Hahaliana ny hahita hoe hafiriana no faharetan'ny volan-tantely miaraka amin'ny ankavia raha lany ho filoha izy. Na tahaka an'i Bush sy ny ankamaroan'ny mpitarika amerikana teo alohany, vetivety dia ho lasa mpanjaka ratsy fanahy ve i Barack fa tsy ho fanantenana ho an'ny fiovana.
Avy hatrany taorian'ny doro taneny Asabotsy Mainty 2009 tany Victoria, nangataka tamiko mba hamoaka lahatsoratra i Solana Larsen, lehiben'ny tonian-dahatsoratra ao amin'ny Global Voices. Gaga aho raha nieritreritra fa tsy hahaliana ireo firenena hafa niharan'ny horohoron-tany, ny tsunamis izay namono olona an'arivony na an'aliny ny loza mitranga ao aminay. Vao maika gaga be raha nahita fa iray amin'ireo lahatsoratra malaza indrindra tamin'ny taona ny ‘Aostralia: Doro-tanety nandrava an'i Victoria’ .
Lohahevitra iray hafa niteraka fahalianana betsaka ny Australia: Indian Homicide Reignites Racism Ruckus taorian'ny nahafatesan'i Nitin Garg tany Melbourne tamin'ny volana Janoary tamin'ity taona (2014) ity. Niteraka fanehoan-kevitra 39 avy amin'ny karazan'olona maro samihafa ny adihevitra somary mahamay indraindray.
Hatramin'ny nampahavitrika ahy ho mpanoratra GV, nanana fahafahana hilatsaka an-tsitrapo ho tonian-dahatsoratra lefitra sy mpikambana ao amin'ny ekipa media sosialy aho. Tombontsoako tamin'ny taona 2011 ihany koa dia ny fiahiana ilay vehivavy tanora Ogandey, Chandia Benadette Kodili, izay tafiditra ho ao anatin'ny ActionAid. Nampianatra ahy ny Skype ihany koa i Kodili ho fitia mifamaly.
Miandrandra fatratra hanavao ny finamanana mivantana amin'i Amira sy ireo mpikambana hafa ato amin'ny fianakaviantsika manerantany aho amin'ny fihaonamben'ny GV 2015.
20 ora izayAzia Atsinanana